कसरी गर्ने परीक्षाको तयारी ? - Health Chautari Health Chautari
१६ माघ २०७७, शुक्रबार २०:१९
कसरी गर्ने परीक्षाको तयारी ?
Published on : १६ माघ २०७७, शुक्रबार २०:१९
अहिले परीक्षाको मौसम छ । बिद्यार्थीको ध्यान पढाइमा केन्दि्रत छ । कसरी राम्रो नतिजा हासिल गर्ने ? अक्सर बिद्यार्थीको ध्याउन्न यहिं हुने गर्छ । एक हिसावले यो सहि पनि हो । तर, नतिजाको दौडमा लाग्दा त्यसले तनाव निम्त्याउँछ, जो परीक्षाको बेला प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।
परीक्षाको बेला तनावमुक्त हुनुपर्छ । पढेको कुरा पुनःस्मरण गर्नुपर्छ । तर, ‘टुप्पि कसेर’, ‘घुँडा धसेर’ किताब घोक्नु सहि बिधी होइन ।
परीक्षाको बेला रातदिन किताव घोक्ने परिपाटी विद्यमान छ । राति अबेरसम्म पढ्ने, बिहान चाडै उठेर फेरी किताव हेर्ने । अभिभावकले पनि यस्तै अपेक्षा गर्छन्, जो बिद्यार्थीको निम्ति बोझिलो बन्न सक्छ । त्यसैले पढेको बखत बेला-बेला बिश्राम लिनुपर्छ । एकछिन बाहिर टहल्ने, खेल्ने वा हल्का मनोरञ्जन लिने गर्नुपर्छ । अझ योग वा प्रणायम गर्न सके सर्बोत्तम हो, यसले मस्तिष्कलाई स्वास्थ्य र चुस्त राख्छ । ध्यान एकाग्र गर्न सहयोग गर्छ ।
रातदिन किताव घोक्नु भन्दा एउटा तालिका तयार गरौं । बिहान कति समय पढ्ने वा बेलुकी कति समय पढ्ने ? सोको निर्धारण गरौं । त्यही अनुसार पढ्ने तालिका बनाउन सकिन्छ । यसले समय-व्यवस्थापन त राम्ररी हुन्छ नै, पढाईको चाप पनि अनुभव हुँदैन ।
लेखेर अध्ययन गर्ने
पाठ कण्ठ गर्ने वा पाठ बाचन गर्ने शैली त्यती प्रभावकारी मानिदैन, खासगरी स्मरणका लागि । आफुले पढेको कुरा सम्झन वा बुझ्नका लागि लेख्ने बिधी उपयुक्त हुन्छ ।
लेखेको कुरालाई स्मरण गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले परीक्षाकै शैलीमा प्रश्नोत्तर लेख्ने बिधी अपनाउनु सकिन्छ । यसले गर्दा परीक्षामा लेख्ने अभ्यास पनि हुन्छ र आत्माविश्वास पनि बढ्छ । कुनैपनि पाठ याद गर्नका लागि पुस्तक पढ्ने वा लेख्ने र आँखा चिम्लिएर त्यसलाई मनन गर्ने हो ।
स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने
परीक्षाको तनाव, अनिन्द्रा, खानपानमा अनियमितताको कारण धेरै बिद्यार्थीलाई यसबेला स्वास्थ्य समस्या देखापर्न सक्छ । त्यसैले परीक्षामा पनि आफ्नो दिनचर्यालाई सन्तुलित राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ । सहि समयमा सुत्ने, उठ्ने खाने तालिका अनुसरण गर्नुपर्छ ।
साथसाथै, ताजा खानेकुरा खाने, पर्याप्त पानी पिउने गर्नुपर्छ । किनभने शारीरिक तथा मानसिक रुपमा स्वास्थ्य भइयो भने नै, पढेको कुरा मस्तिष्कले ग्रहण गर्छ । र, त्यसलाई आफुले सरल ढंगमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
– उत्तर लेख्ने भन्दा पनि प्रश्न बनाउने अभ्यास गर्न सकिन्छ । आफैले प्रश्न बनाएर त्यसको हल गर्ने अभ्यास गरौ ।
– सामूहिक पठन बिधी पनि प्रभावकारी हुन्छ । मिल्ने साथीहरुको समूह बनाएर सम्बन्धित बिषयमा तर्क-बितर्क गर्ने अभ्यास गरौं । यसरी प्राप्त गरेको ज्ञान दीगो पनि हुन्छ ।
– पाठ घोक्ने प्रयास नगरौं । बरु पढेको कुरालाई बुझ्ने वा स्मरण गर्ने अभ्यास गरौं ।
– आफुलाई अप्ठ्यारो लाग्ने बिषयमा बढी समय दिनुपर्छ र मिहेनत पनि गर्नुपर्छ । तर, त्यसका लागि चिन्तित हुनुपर्दैन । आफुले बुझेको र जानेको कुरालाई राम्ररी प्रस्तुत गर्न सकियो भने काफी हुन्छ ।
– आत्माविश्वासले तपाईको परीक्षामा ठूलो उर्जा मिल्छ । परीक्षासँग डराउने वा हतास हुने होइन, परीक्षालाई अवसरको रुपमा लिनुपर्छ ।
कसरी लेख्दा राम्रो अंक प्राप्त हुन्छ ?
– प्रश्नपत्र हात परेपछि पहिला त्यसलाई ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ । अतः त्यसमध्ये आफुलाई सबैभन्दा सजिलो लाग्ने प्रश्नको हल गर्नुपर्छ । यसले आफुमा आत्माविश्वास बढ्छ । बिर्सिएका कति कुराहरु पनि स्मरण हुन्छ ।
– उत्तर लेख्नुअघि प्रश्न दोहोर्‍याएर पढ्ने । प्रश्नको आशय बुझेर मात्र त्यसको जवाफ लेख्नुपर्छ । प्रश्नले के मागेको हो, कति मागेको हो त्यतीमात्र जवाफ दिनुपर्छ । प्रश्न हल गर्दा प्राप्त हुने अंकको आधारमा जवाफ कति गहिराइमा पुगेर दिने हो भन्ने निर्धारण गर्नुपर्छ ।
– प्रश्न बुझेर आफ्नै शैलीमा जवाफ दिने अभ्यास राम्रो हो । यसबाट बिद्यार्थीको बौद्धिक क्षमता मापन हुने हो । रचनात्मक जवाफले नै बढी अंक प्राप्त हुन्छ ।
अभिभावकले उत्प्रेरणा दिने
परीक्षाको बेला अभिभावकले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ । आफ्ना छोराछोरीमाथि बढी अपेक्षा लाद्ने होइन । उनीहरुलाई नतिजामा केन्दि्रत गरेर धेरै अंक ल्याउनुपर्छ भनेर दवाव दिनु हुँदैन । बरु, सहज वातावरण तय गरिदिनुपर्छ, जसले उनीहरुलाई कुनै बोझ महसुष नहोस् । छोराछोरीलाई अरुसँग तुलना गरेर मनोबल गिराउने काम गर्नु हुन्न । बरु, पढ्नका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ ।
छोराछोरीको स्वास्थ्यमा बढी ख्याल राख्नुपर्छ । उनीहरुलाई सुत्ने, उठ्ने तालिका नियमित गराइदिनुपर्छ । खानपानमा पनि सर्तक हुनुपर्छ ।
– परीक्षामा छोराछोरीलाई भरपुर आइरन र प्रोटिनयुक्त खानाको आवश्यक हुन्छ ।
– पानी एवं झोल पदार्थ पनि पुग्दो मात्रामा दिनुपर्छ ।
– लेमन टि, ग्रीन टि दिनुपर्छ ।
-छोराछोरीलाई आफुले विना सर्त प्रेम गरिरहेको अनुभूति दिलाउनुपर्छ ।
Tags : जानकारी टिप्स लाेकसेवा लाेकसेवा (Loksewa)